Ny fonosana sakafo ara-tontolo iainana dia efa...
Hevi-baovao— Fonosana tsara amin'ny tontolo iainana Rehefa miha-mitombo hatrany ny olana ara-tontolo iainana ho an'ny mpanjifa, ny sehatra iray izay mahasarika ny sain'ny maro dia ny famonosana ara-tontolo iainana. More comp...
Mitohy ny baikon'ny GTMSMART...
Ny fitomboana haingana ny baiko ho an'ny milina thermoforming, izany dia noho ny fikatsahantsika ny fanavaozana ny teknolojia sy ny fanatsarana ny vidiny. Ny GTMSMART koa dia nikolokolo ny marika terminal any ampitan-dranomasina ...
Fanasokajiana mekanika Pla...
Ny fiforonan'ny plastika dia ny fanaovana plastika amin'ny endrika isan-karazany (vovoka, poti, vahaolana ary fanaparitahana) ho vokatra na banga misy endrika ilaina. Raha fintinina, dia ny famolavolan'ny p...
Fepetra sy Teknolojia fanodinana...
Ny fanodinana ny akora manta plastika dia ny dingan'ny fandoroana, ny fikorianan'ny rano ary ny fampangatsiahana ireo poti fingotra ho vokatra vita aorian'ny fametrahana. Dingan'ny fanafanana ary avy eo ny fampangatsiahana. Izany ...
Ny maha-zava-dehibe ny Automatic feno...
Ny antony lehibe indrindra hampiroboroboana ny indostrian'ny vokatra taratasy dia ny fiarovana ny tontolo iainana amin'ny vokatra taratasy. Ny fampiasana sy fanariana ny vokatra vita amin'ny taratasy no...
Inona no plastika mahazatra ampiasaina amin'ny...
Ny fomba iray tena tsara hanaovana vokatra avy amin'ny plastika dia amin'ny alalan'ny milina thermoforming, izay ny dingan'ny fanafanana takelaka plastika lehibe ho amin'ny mari-pana avo dia avo, ary avy eo mangatsiaka izany amin'ny endrika takiana...
Fahatakarana sy fifantenana ny P...
Miaraka amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fiainan'ny olona, ​​ny hafainganan'ny fiainana sy ny fivoaran'ny fizahan-tany haingana, ny fihinanana sakafo any ivelany dia lasa mahazatra. Ny fanjifana ny...
Inona no atao hoe Pressure Thermoforming?
Inona no atao hoe Pressure Thermoforming? Pressure thermoforming dia teknika famokarana thermoforming plastika ao anatin'ny fe-potoana midadasika kokoa amin'ny fizotran'ny thermoforming plastika. Ao anatin'ny tsindry miforona 2 dimen...
Nahoana no misafidy ny hampiasa lovia zana-kazo?
Na voninkazo na anana, zana-kazo lovia dia fiovana amin'ny zaridaina maoderina, manome antoka ny famokarana haingana sy lehibe. Ny ankamaroan'ny zavamaniry dia manomboka toy ny zana-kazo amin'ny zana-kazo manomboka ...
Inona no anjara asan'ny kaopy plastika M...
Inona no milina fanaovana kaopy Ny milina fanaovana kaopy plastika fanary dia natao indrindra ho an'ny famokarana fitoeran-javatra plastika isan-karazany (kaopy jelly, kaopy fisotroana, fitoeran-javatra fonosana, sns) miaraka amin'ny thermopla...
Momba ny vilany voninkazo plastika Ny...
Nahoana no misafidy ny vilany plastika? Matetika ny olona no liana amin'ny mpamboly plastika amin'ny ankapobeny satria mora, mora azo ary maivana. Ny vilany plastika dia maivana, matanjaka ary malefaka. Plast...
Ianaro ny fomba namoronan'ny vacuum Mak...
Ny fanamorana maoderina maro izay ankafizintsika isan'andro dia azo atao noho ny fisian'ny banga. Toy ny dingana famokarana maro samihafa, fitaovana fitsaboana mamonjy aina, fonosana sakafo, ary fiara...